जुली 05 – एक्लोपन हट्नु ! – Elim Glorious Revival Church – Kodambakkam
जुली 05 – एक्लोपन हट्नु !
By elimchurchgospel | July 5, 2021 | Appam - Nepali | No Comments
“जसरी म मोशासँग रहें, त्‍यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्‌ने, अनि तँलाई त्‍याग्‍नेछैनँ।” (यहोशू 1:5)
परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका ठूलठूला चीजहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो चिज हामीसंग भएको उहाँको उपस्थिति हो। उहाँको उपस्थिति जत्तिको मीठो र शक्तिशाली केहि छैन। येशू ख्रीष्ट हामीलाई उहाँको महिमामय उपस्थितिले भर्नको निम्ति पृथ्वीमा आउनुभयो। पवित्रशास्त्रले भन्छ, “हेर, म युगको अन्‍त्‍यसम्‍म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु।” (मत्ती 28:20)। यसो भनेर , उहाँ सदा सर्वदा हामीसँग हुनुहुन्छ।
ब्राह्मण समुदायका एक भाइले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्न नसकिने समस्याको सामना गरे। एक दिन उनका आमा-बुबाले उनलाई सोधे कि तलाई आफ्ना आमाबुबा चाहिन्छ कि येशु चाहिन्छ? उनले शान्त आवाजमा भने, ‘येशू ख्रीष्ट’। उनलाई त्यसो भए सम्पत्ती र अंश चाहिंदैन हैन भनेर सोध्दा उनले जवाफ दिए कि येशू ख्रीष्ट नै उनको लागि सबथोक हुनुहुन्छ। यो सुनेर उनका आमा बुबा क्रोधित भए, उनको लुगा च्यातीदिए र उनलाई घरबाट निकालिदिए।
जब ती भाइ बाटोमा एक्लै हिँडिरहेका थिए, उनले येशू ख्रीष्टको मधुर आवाज एकदम प्रस्टै सुने। येशू ख्रीष्टले उनलाई भन्नुभयो, “छोरा, म तिमीलाई टुहुरो छोड्ने छैन”। परमेश्वरको मीठो उपस्थितिले त्यो भाइलाई भरिदियो।
एक दिन, परमेश्वरले गिदोनलाई भन्नुभयो, “तँ वीर मानिस होस्‌, र परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्‍छ।”(न्यायकर्ताहरू 6:12)। स्वर्गदूतले मरियमलाई भने,“हे कृपा-पात्र, तिमीलाई अभिवादन! परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्‍छ।”(लूका 1:28)। परमेश्वरले मोशालाई हेर्नुभयो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो, “म हुँ जो म हुँ” (प्रस्थान 3:14)। उही परमेश्वर कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न र तपाईंसँग शक्तिशाली रूपमा बस्नुहुन्छ। त्यसैले, बलियो हुनुहोस् र सबै थकान हटाउनुहोस् र स्फूर्ति पाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईं मार्फत महिमामय कार्यहरू गर्नुहुनेछ।
राजा दाऊदलाई थाहा थियो कि परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्छ। उनले आफैंलाई यसो भनेर बलियो बनाए कि उनी कहिल्यै डगमगाउने छैनन् किनकि उनले परमेश्वरलाई आफ्नो अघि लगाएका छन्। परमेश्वर आफ्ना गोठालाले कहिल्यै छोड्नुहुनेछैन भन्ने कुरा थाह पाएकोले, उनी खुशीसाथ् यसो भन्छन्, “मृत्‍युको अन्‍धकारमय घाटी भएर जानुपरे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउनेछैनँ, किनकि तपाईं मेरो साथमा हुनुहुन्‍छ। तपाईंको लट्ठी र तपाईंको लहुरोले मलाई सान्‍त्‍वना दिन्‍छन्‌। “(भजनसंग्रह २३:४) यसैले अझ बलिया भे । परमेश्वर अन्तसम्म दाऊदको साथमा रहनुभयो र उनलाई अगुवाई गर्नुभयो। उहाले तपाईंलाई पनि त्यसैगरी अगुवाई गर्नुहुनेछ।
मनन गर्नका लागि: “ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दैरहनुभयो, र चिन्‍हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ़ पार्नुभयो। आमेन।” (मर्कुस १६:२०)